HIM | Health in Myanmar » 2013 » November
They Shouldn’t Be Ill-Treated for Their Occupation
The question of how to handle the sex industry in Burma was raised in Parliament earlier this year, withaproposal to legalize and regulate the trade ultimately rejected by lawmakers. The issue isacontroversial one in Burma, pitting those who adhere to what they call “traditional Burmese cultural values” against those who approach the subject fromapublic health perspective, arguing that it is better to bring prostitution out of the shadows.
မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်သလို မဖြစ်ဖို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, SW, အခွင့်အရေး, ဧရာဝတီ
တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့် မရှိတာကြောင့်ဘဲ လိင်အလုပ်သမတွေဟာ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကိုမရဘဲ နေရာစုံမှာ ဖိနှိပ်မှုနဲ့ ကြုံ တွေ့နေရသလို၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေလည်း မရရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် HIV ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဖြစ်စေတဲ့ အဓိက ဦး တည် အုပ်စု ၃ မျိုးအနက် တခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းတွေကတဆင့် ရောဂါကူးစက် ပြန့်ပွားမှုတွေလည်း ဖြစ် ပေါ်နေဆဲပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် HIV ရောဂါပိုး ရှိသူ၏ သွေးကို လူနာ နှစ်ဦးထံသို့ သွင်းပေးခဲ့မိ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, ကုသမှု, မြဝတီ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ယခင်က HIV ပိုးပါသော သွေးသွင်းမှု တစ်ရပ် ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီးနောက် ဂျပန် ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့သည် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ သွေးစစ် ဆေးသည့် စနစ်များကို ပြန်လည် စိစစ်ခဲ့သည့် အချိန်မှ စ၍ ယခုကဲ့သို့ HIV ပိုးပါသော သွေးများကို လူနာများ ထံသို့ သွင်းပေးမှုသည် ပထမဆုံး အကြိမ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
HIV ကာကွယ် တားဆီးရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေး
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, မြဝတီ
မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင့်ရေး အသင်းနှင့် ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး HIV ကာကွယ် တားဆီးရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲကို ယမန်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် လှိုင်သာ ယာမြို့နယ် ဝေဇယန္တာ ဓမ္မာရုံ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
HIV ဝေဒနာရှင်များနှင့် နန်းခင်ဇေယျာ အတူလမ်းလျှောက်မည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, မဇ္ဈိမ
“AIDS ဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေ အတွက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက အကူအညီတောင်းလို့ လုပ်ကိုင်ဖြစ် တာပါ။ ကန်တော်ကြီးမှာပဲ စုရပ်ထားပြီး ကန်တစ်ပတ် လမ်းလျှောက်ကြမှာပါ။ HIV နဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကိုင် နေကြတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေ အများကြီးပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားအားလုံး အတူတူပဲဆိုတဲ့ အသိကို ပေး ချင်လို့ ဒီလိုပွဲမှာ ပါဝင်တာပါ” ဟု နန်းခင်ဇေယျာက ဆိုသည်။
အိပ်​ခ်ျ​အိုင်​ဗွီ ​ကျောင်း​သား​များ​ အ​ပေါ် ​ခွဲ​ခြား​ဆက်​ဆံ​မှု​ရှိ​နေ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, DVB, HIV, ကလေး
“​က​လေး​ငယ်​တွေ​ကို ​သတ်​သတ်​လေ့​လာ​တဲ့ ​သု​တေ​သ​န​က​ကျ​တော့ ​အ​ခု ​လုပ်​နေ ​တုန်း​ပါ​ပဲ။ ​အ​ချက်​အ​လက် ​ကောက်​နေ​တုန်း​ ပါ​ပဲ။ ​အဲ့​ဒီ​ဟာ​တွေ​ရဲ့ ​တွေ့ရှိ​ချက်​တွေ​က​တော့ေ​ရှ့နှစ်​လောက်​ကျ​မှ ​ထွက်​လာ​မှာ​ပေါ့​နော်။ ​အ​ခု ​ဒီ​တင်​ပြ​တဲ့ ​သု​တေ​သ​န​ က​တော့ ​အိမ်​ထောင်​စု​တွေ​လို့ ​ပြော​လိုက်​တဲ့​ အ​တွက် ​က​လေး​တွေ​ တ​ချို့ ​ပါ​တယ်​ပေါ့​နော်။ ​က​လေး​တွေ​ရဲ့ ​ပ​ညာ​ရေး​ကို​လည်း ​ဒီ​သု​တေ​သ​န​မှာ ​ကျ​မ​တို့ ​တင်​ပြ​ထား​တယ်။”
Graphene: The wonder material being used to create thinner, stronger condoms
The current rate of global production is 15 billion units/year with an estimated 750 million users andasteadily growing market. When used properly, they reliably protect females from pregnancy and both partners from numerous sexually transmitted infections, including HIV transmission.
HIV/AIDS ဝေဒနာရှင် တိုးပွား၍ အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, ဖြူဖြူသင်း, မြစ်မခ
ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ HIV/AIDS နေ့တွင် ဝေဒနာရှင်များ အတွက် ဆေးဝါး လုံလောက်စွာ ရရှိမှု၊ ပညာပေးမှု၊ ခွဲခြားဆက်ခံမှု ပပျောက်ရန် အစိုးရအနေနှင့် ယခုထက်ပိုမို လုပ်ဆောင် ပေးရန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မှ ကြေငြာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
HIV ပိုး ရှိမရှိ သေချာစေလို (အမေးအဖြေ) (၅)
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&A13 comments | Tags: AIDS, HIV, လမင်းကို
တစ်မျိုးက အမြန်စစ်တဲ့ ကိရိယာ (rapid test) နဲ့ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒါက နာရီဝက်အတွင်းမှာ ပိုးရှိ/မရှိကို အဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။ ၉၄-၉၉ ၇ာခိုင်နှုန်း စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီ စစ်ဆေးခြင်းက နယ်တွေမှာလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီမှာ စစ်လို့ Positive/Reactive ဆိုတဲ့ အဖြေရမှ (ဒီအခြေအနေအထိ စစ်တဲ့ လူမှာ ပိုးရှိ/မရှိကို မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်) သေချာအောင် အခြား စစ်ဆေးခြင်းတစ်မျိုး (ELISA/Westernblock) နဲ့ ထပ်စစ်ရပါတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, UNAIDS, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂ဝ၁၂ စာရင်းအရ ပိုးရှိသူ အသစ်ပေါင်း ၂့၃ သန်းရှိတယ်။ ၂ဝဝ၁ နဲ့စာရင်တော့ ၃၃% ကျလာတယ်။ ကလေးတွေမှာလဲ ၅၂% လျော့နည်း လာတာဖြစ်တယ်။ သေဆုံးသူကလဲ ၃ဝ% ကျဆင်းတယ်။ ၂ဝဝ၅ တုံးက အများဆုံး သေဆုံး ခဲ့ရတယ်။ ၂ဝ၁၂ အကုန်မှာ ဝင်ငွေနည်းနဲ့ ဝင်သွေမများတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဆေးရရှိသူ အရေအတွက်ကို ၉့၇ သန်း ရှိအောင် ရည်မှန်းထားခဲ့တယ်။ HIV နဲ့ TB တွဲဖြစ်နေသူတွေရဲ့ သေဆုံးမှုက ၂ဝဝ၄ ကနေတွက်ရင် ၃၆% ကျလာတယ်။
HIV ကို အန်တုလို့ အသက်ဆက်ရှင်သန်အောင် နေထိုင်ကာ ချစ်ရသူ ယောင်္ကျားလေးနှင့် လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ဦး၏ အာဂသတ္တိ (နောက်ဆက်တွဲ)
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါ3း comments | Tags: ART, HIV, PLH, မြဝတီ
HIV ကာကွယ်ရေး ကုသရေးနဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာတွေကို လူတိုင်း လက်လှမ်းမှီနိုင်ဖို့၊ သတင်း အချက်အလက် အားလုံးဟာ မရှိမဖြစ် ရသင့်တဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည် ခံစားတတ် ခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ကုသပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတွေ ရဖို့ဆိုတာ သူမှရယ် ငါမှ ရယ် မဟုတ်ပါဘူး၊ လူတိုင်းရဲ့အခြေခံ လိုအပ်ချက် တစ်ခုဆိုတာ အားလုံး သိထားရမှာလို့လဲ အမြင်မှန် ရခဲ့ပါတယ်။